Xukuumadda Washington oo ku dhawaaqday dhammaadka dhacdooyinka Suuriya. – Radio Muqdisho
Xukuumadda Washington oo ku dhawaaqday dhammaadka dhacdooyinka Suuriya.
Madaxa ciidamada Militeriga Mareykanka aya ku dhawaaqay dhammaadka dhacdooyinka argagaxa leh ee Suuriya ka dhaca, Faransiiska iyo Ingiriiska oo ka soo horjeeda Barnaamijka hubka kiimikada ee Suuriya loo isticmaalay ayaa ku taageeray wararka ka soo yeeray xulafada Washington iyaga oo dhanka kale xukuumadda Suuriya, Ruushka iyo Iran ku cambaareyay dhiibatooyinka ay ka geeysanayaan Suuriya.
Danford oo uu weheliya Xoghayaha Difaaca Mareykanka James Matisse, aya sheegay in aysan jirin qorshe howlgal milatari ah oo dheraad ah oo ay ka fulinayan gudaha Suuriya, isaga oo intaa ku daray in Ruushka horey loogu digin weerarrada uu ka wada gudaha Suuriya, Madaxa ciidamada Militeriga Mareykanka aya sidokale sheegay in Washington iyo xulufadeeda ay ku dadaalayaan in aysan beegsan ciidamada Ruushka ee Suuriya ku sugan.
Danford aya intaasi ku daray in weerarkan uu amray madaxweyne Donald Trump uu bilowday subaxnimadii saaka waxana ugu horeeyntii weerarkan lagu beegsaday Sedex xarumood oo lala xiriirinaya Barnaamijka hubka kiimikada ah ee yaala saldhigyada Bishaar al-Asad.
Gobaha ay werarada ka geysteen Mareykanka aya waxa kamid ah Xarun cilmi baaris ah oo ku dhaw Magaalada Dimishiq, xarun lagu keydiyo hubka kiimikada ah iyo xarun muhiim ah oo ku dhaw magaalada Xomos.
Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka aya si adag ugu hadashay Gabood falo ay shegeen inuu geeystay Bishaar Al Asad kuwa oo aha weeraro loo adeegsaday hubka kiimikada ah kaasi oo kadhacay magaalada Duuma oo dhacda bariga Caasimada Suuriya ee Dimishiq.
Madaxa ciidamada militeriga Maraykanka ayaa sheegay in weerarka oo socday muddo saacada ay qeyb ka aheyeen weerarro dhanka Cirka ah oo ruxay degaanada ku harereeysay halkii ay ka dhaceen Werarada.
Sanadkii la soo dhaafay Mareykanka ayaa weerar ku qaaday goobo ay ku sugnayeen Ciidamo ka amar qaato xukuumadda Asad kwaasi oo la sheegay in gaaska khatarta ah ay u adeegsadeen werarrada ay ka fuliyeen goobaha ay ku suganyahiin dadka rayidka ah.
dawlada suriya oo ka hadashay weerarkan ayaa sheegtay in tani ay tahay gardarro aan geed loosoo gabban, iyadoo intaas ay kudartay in ciidamada suuriya ay soo rideen gantaalo ay soo rideen mareykanka.
xukuumadda Mareykanka ayaa sheegtay in ay bartilmaameydsanayaan meelo dawlada suriya ay hubka kiimikada ku keydsato, ujeedadeenu ay tahay inay burburiyaan dhammaan xarumaha hubkaas uu ku keydsanyahay.
Khubarada falanqeysa Arimaha milatariga ayaa sheegay in weerarada xulafada Mareykanka ay kuqaaday Suuriya ay xaalada ugasii dari doonto.
Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay ka qeyb galka Shir Madaxeexdka 29-aad ee Jaamacadda Carabta
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta